Muviri Wakakwana, Runako muClassical Greece | Absolut Kufamba
maruuzen | | Updated on 15/04/2021 11:49 | Greece
Runako itsika, zvinoyevedza nhasi zvainge zvisina kunaka kare, chii chichava chakanaka muzana ramakore chingave chakasiyana kwazvo nezvatinofunga nenzira iyi nhasi. Asi ichokwadi kuti nhasi maitiro akajairika erunako anotongwa neimwe nzira neizvo maGiriki ekare airangarira seakakodzera runako. Ehe, muviri wakakwana uye runako akazvarwa akazvarwa muClassical Greece.
Tichataura nhasi, saka, nezve kunobva runako munyika medu: Classical Greece. Ikoko, mazana emakore apfuura, zviyero zvedu zvinogara zvemuviri uye runako rwakazvarwa.
1 Yakajeka Greece
2 Runako rwakakwana
3 Muviri wakakwana
Iri ndiro zita renguva munhoroondo yeGreek, iyo, zvakanyanya kutaura, iri pakati pezana ramakore rechishanu nerechitanhatu BC. kubva C. Inguva yezuva repamusoro yechiGreek polis uye nekubwinya kwetsika Kubwinya uku kunonyanya kuonekera mukuveza, kwakateya hwaro hweiyi hunyanzvi kubva ipapo zvichienda mberi.
MaGreek vakatarisa mutumbi uye izvi, kana zvaive zvakanaka, zvairatidza mukati mekuyevedza. Izwi rehunhu hwese, semativi maviri emari imwe chete, raive kaloskagathos: akanaka mukati uye akanaka kunze. Kunyanya dai aive jaya.
Mutsetse wepfungwa uyu wakaratidzwa muchivezwa, pfungwa yekuti jaya rakanaka rakakomborerwa katatu, nekuda kwerunako rwake, nehungwaru hwake, uye nekudiwa navamwari. Kwenguva yakareba zvaifungidzirwa kuti zvivezwa zvenguva ino zvaimiririra iyo pfungwa, fungidziro, chishuwo, asi chokwadi ndechekuti mafuru akawanikwa, saka nhasi zvave kuzivikanwa kuti Izvo zvakavezwa zvakavezwa zvakagadzirwa pakati pezana ramakore rechishanu nerechitatu BC zvakavakirwa pavanhu chaivo.
Mumwe murume akafukidzwa nesepa uye fomu yacho yakazoshandiswa kugadzira chivezwa. MaGiriki, tinotaura nezvazvo varume vakapedza nguva yakareba vari munzvimbo yekurovedza muviri (Dai vaive vakapfuma uye vaine nguva yemahara, pachena). Avhareji yeAtene kana mugari wemuSpartan aive nemuviri wakavezwa semuenzaniso weVerace: chiuno chakamanikana, musana, mudiki mbichana uye ganda rine mafuta ...
Izvo zvine chekuita nevarume, asi iyo yakanaka yechiGiriki yerunako yaive yevakadzi? Zvakanaka, zvakasiyana kwazvo. Kana runako mumurume rwaive chikomborero, mumukadzi chaive chinhu chakaipa. Mukadzi akanaka anga akafanana nedambudziko. kalon kakon, chinhu chakanaka uye chakaipa, chaigona kududzirwa. Mukadzi wacho aive akanaka nekuti aive akanaka uye aive akanaka nekuti aive akanaka. Mutsara iwoyo wekufunga.
Uye zvinoitawo sekudaro runako runoreva kukwikwidza: paive nemakwikwi erunako akadaidzwa kallisteia, mune izvo zviitiko zvakaitika kuzvitsuwa zveLesbos neTenedos uko kwaitongwa vasikana. Semuenzaniso, paive nemakwikwi mukukudza Aphrodite Kallipugos uye magaro ake akanaka. Pane nyaya yakakomberedza kutsvaga kwenzvimbo yekumuvakira iye temberi muSicily iyo yakazopedzisira yasarudzwa pakati pemagaro evanasikana vaviri vevarimi: uyo anokunda akasarudza saiti kuti avake tembere, nekuda kwekuti aive nembongoro iri nani.
Chii chinoonekwa sechakanaka muClassical Greece? Zvinoenderana nezvivakwa nezvivezwa, runyorwa pfupi runogona kuitwa rweizvo vaGiriki vekare vaifunga semuviri wakanaka. matama anofanira kunge ari epingi (chakagadzirwa kana chechisikigo), vhudzi raifanira kuveurwa kana kurongedzwa zvakanaka mumaraini, ganda rinofanira kunge rakajeka y maziso anofanira kunge ane eyeliner.
Muviri wakakwana wemukadzi unofanirwa kuve we chiuno chakafara nemaoko machena, iyo nguva zhinji dzavaibuda nemaune nehupfu. Kana mukadzi wacho aive mutsvuku, makorokoto. Zvingangodaro kuti kuti muMiddle Ages matsvuku akatsvuka zvakanyanya, nehuroyi uye izvo zvinhu zvisinganzwisisike, asi muClassical yechinyakare vainamatwa. The blondes? Vakanga vasina nguva yakaipa futi. Muchidimbu, mwarikadzi Aphrodite kana Helen weTroy zvaive zvakafanana nechakanaka cherunako.
Pfungwa yehupamhi hwehudyu uye chena ganda yainyatso chengetwa kwemazana emakore mazhinji: muviri wakasimba unofananidzwa nehutano hwakanaka uye nekudaro, hupenyu uine hutano. Ganda jena rakafanana, uyezve, nekusave muranda kana kuita basa panze asi mumba.
Asi zvadaro, senge nhasi, kuva akanaka uye kuva nemuviri wakakwana kwaisanganisira kuzvipira. Vashoma vanozvarwa vakabatwa nemashiripiti wand. Chido chekuchengeta ganda rakachena, kana kuchichenesa, zvakaita kuti vakadzi vatendeukire kunzira dzinogona kukanganisa hutano hwavo.
Imwe yemashoko ekutanga pamusoro pezvizoro munguva yekare ndeyechokwadi kubva panguva iyoyo. Muzivi wechiGreek Theofastus de Eresos anodaro achitsanangura magadzirisiro avakaita lead-based cream kana wakisi. Zviripachena, lead yaive uye iri chepfu.
Kushandiswa kwe cheno Yakanga yakapararira mukirasi yepamusoro sezvo zvese zvaishandiswa kushandisa runako, asi paive nemastaera akati wandei. Pfambi dzaive nadzo uye nevakadzi vemhuri yakanaka, imwe. Izvo zvaive zvakakwana kuti uone kuti mukadzi akagadzirwa sei kuti amusiyanise, nekuti iyo yekutanga yaishandisa maziso akatakurwa zvakanyanya uye miromo yakajeka, vhudzi rakapendwa uye dzimwe mbatya dzakashinga. Senguva dzose.
Chii chaive magadzirirwo ebvudzi muClassical Greece? Iyo yekare mienzaniso yehairsty mune vechiGreek vakadzi vanovaratidza nayo machira, akawanda uye madiki. Kana isu tikatarisa hari, semuenzaniso, iwe unogona kuona ichi chimiro, asi zviripachena nekufamba kwenguva iyo fashoni yakachinja.
Zvinotaridza sekunge kutenderedza zana ramakore rechishanu panzvimbo pekupfeka vhudzi ravo pasi ivo vakatanga kuripfeka rakasungwa, kazhinji mu impeller. Ivo zvakare vakashandisa zvishongo uye zvishongedzo zvakasiyana senge zvishongo kana chimwe chinhu kuratidza hupfumi hwemhuri. Yaiva iyo bvudzi pfupi? Hongu, asi zvaive zvakafanana ne kushungurudzika kana kushomeka kwenzvimbo.
Ehe, zvinoita sekudaro bvudzi rakareruka raikosha kupfuura rima, saka zvaive zvakajairika kushandisa vhiniga kana muto wemonimu kujekesa pamwe chete nezuva. Uye kana vaida makutu, vaigadzira uye voanyorovesa newakisi kuitira kuti bvudzi rigare kwenguva refu. Uye zvakadii neiyo bvudzi remuviri? Vakanga vari vakadzi vechiGreek vane mvere sevakadzi vagara vari kusvikira muzana ramakore rechimakumi maviri?
Kubvisa bvudzi kwaiwanzoitika uyezve, kwete chete pakati pevaGiriki asiwo mune dzimwe tsika. Panguva iyoyo, muClassical Greece, kusave nevhudzi kwaive kwemafashoni, kunyangwe paine mazano akati wandei nezvekuti vakabvisa sei bvudzi. Zvinonzi vhudzi revoruzhinji rakapiswa nemurazvo kana kuveurwa nechisvo.
Saka kana mukadzi akafamba nenguva nhasi, Ndezvipi zvigadzirwa zvingatadza kushaikwa patafura yako yekupfeka?yeganda rakaoma uye kana yaizadzwa nemiti inonhuwirira sezvo yaipa munhuwi wemuviri kana vhudzi; miel mune zvekuzora, wakisi inosanganiswa nemvura yemaruva uye nhevedzano yemafuta anonhuwirira akagadzirwa nemafuta akakosha achiisa mafuta nemaruva anonhuwirira kwazvo, marasha yemaziso, eyelashes uye tsiye uye mamwe mamineral ayo, kana pasi, aishanda semimvuri uye kutsvuka.
Imwe chokwadi: iyo eyebrow imwe Izvi zvakawanikwa nekupenda mutsetse nemarasha kana, kana zvaive zvisina kukwana, vakanamatira mvere dzemhuka neinomera yemiriwo.
Ichokwadi icho MuClassical Greece, maartist akatsanangudza zvakare pfungwa yekunaka kwemuviri mune varume nevakadzi kugadzira pfungwa ye "Muviri wakanaka." Muviri wemunhu waive, kwavari, chinhu chekunakidzwa kwekunzwa uye kuratidzwa kwehungwaru hwepfungwa.
VaGiriki vakanzwisisa kuti kukwana hakupo mune zvakasikwa, zvinopihwa nehunyanzvi. Saka pane pfungwa yekuti muviri wakavezwa wakachena dhizaini. Pamusoro takataura kuti vezvidhori vechiGreek vaishandisa mamodheru chaiwo, ichokwadi, asi dzimwe nguva yaisave imwe yemhando, asi akati wandei Semuenzaniso, maoko eimwe, musoro weumwe. Nekudaro, kurumbidzwa kwakanaka mumazuva iwayo kwaive kuudza jaya kuti airatidzika kunge chivezwa.
Kana Aphrodite yaive yakanaka yekunaka kwevakadzi, Heracles yaive yakanaka yemuviri wakakwana wemurume. Mutambi, murume mukuru, mumiriri webonde uye chishuwo. Kufanana nanhasi nematatoo, iyo art yemuviri nekusimudza masimbi, ipapo ndaive ndakatarisawo mutumbi wevamwe newavo.
ChiGreek hunyanzvi hwainyanya kutarisisa chimiro chechirume kupfuura mune zvechikadzi uye zvinoda kuona kuti, nekufamba kwenguva, hunyanzvi hwakateedzera sei nzira inopinduka, ichitarisa zvakanyanya pavakadzi pane kuvarume. Ngatifungei nezveMiddle Ages, iyo Renaissance kana mafomu eBaroque.
Pakufungisisa, gakava pamusoro pemuviri uye runako nguva dzose rave riri mukuonekera. Kubva makare-kare kusvika nhasi, kubva kuna Nefertiti naAphrodite, kusvika kuvakadzi veRubens, Marilyn Monroe, supermodels vema90s uye vanozivikanwa vezana ramakumi maviri nemasere vane mapurasitiki ekubata, tinoramba tichitarisa chakanakira muviri wemunhu uyo zvimwe kune imwe kunze kwedu.
Nekudaro, ikozvino unoziva, nguva inotevera paunoshanyira musimamende ukasangana nezvivezwa zvekare, tarisa zvakanyanya kune iyo miviri uye yeavo vanhu vanofamba vakakukomberedza. Mubvunzo ndewokuti, tichazvigamuchira riini semasikirwo akaitwa isu?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Muviri wakakwana, Runako muClassical Greece
Iyo mastic resin, inowanikwa kuChios